Buy မာလာစော့ပေါ့ in ရန်ကုန် (4,500 Ks) on ipivi
😋😋မီးဖိုမလို ရေနွေးမလိုပါ ပုံမှန်ရေသန့် (nomal temperature ပါ , ရေအေးဆိုလို့ ရေခဲရေထည့်တာမျိုးမဟုတ်ပါ)
🔥အပူပေးအထုပ်ပါသောကြောင့် ကလေးငယ်များနှင့်ဝေးဝေးထားပေးပါ အပူလောင်မှာစိုးလို့ပါ အပူပေးအထုပ်ကမီးဖိုအစားထိုးပစ္စည်းမို့ စားသောက်ပြီးသည့်အခါတခါထဲအမှိုက်တောင်းထဲလွှတ်ပစ်ရပါမယ် ထပ်ပြန်သုံးလို့မရတော့ပါ။
🥡ဟော့ပေါ့ဗူးသည် ၂ ထပ်ဖြစ်သည့်အတွက် အပူပေးအထုပ်သည် အောက်ဆုံးဆင့်မှာထည့်ရပါမယ် စားသုံးမည့်အစားအစာသည်အပေါ်အဆင့်ဖြစ်ရပါမယ်။ ထို့ကြောင့်အစားအသောက်ကိုအန္တရာယ်မပေးနိုင်ပါ။
1. ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အထုပ်အားလုံးကိုဖောက်လိုက်ပီးအစီစဉ်တကျ ပထမထပ်ဗူးထဲထည့်ပါ ပြီးလျှင်သတ်မှတ်ထားသောရေ level မျဉ်းထိ ရေအေးကိုထည့်ပါ (ရေအေးပဲထည့်ရပါမည်)
2. အပြင်ဖက် မှပလပ်စတစ်ဖြင့်ထုပ်ထားသောရေနွေးအိတ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါ (အပူပေးအထုပ်ကိုအုပ်ထားသောအစကို မဖွင့်ရပါ) အောက်ထပ်ဗူးထဲတွင် ထည့်ပြီးသတ်မှတ်ထားသော levelမျဉ်း ထိ ရေအေးကိုရေနွေးအိတ်မြုပ်ရုံထိထည့်ပေးရပါမည် 🙂😋
3.ပထမထပ်ရှိဗူးကို အလျှင်အမြန်အောက်ဆုံးထပ်ဗူးထဲသို့ ထည့်လိုက်ပြီး အဖုံးအုပ်ထားပါ ( အုပ်ထားသောအဖုံးကိုလေပေါက်ဖောက်ထားသည်ကိုစစ်ဆေးပါ မဖောက်ထားလျှင်ဖောက်ပါ) 15 မိနစ်နေလျှင် ပူပူလေးနဲ့အရသာရှိစွာသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ 😍
2X mini air cooler
နောကျဆုံးလုပျဆောငျမှု: ၈ ရကျ ခနျ့က
ကြည့်သူအရေအတွက်: 37 (+3)
ရောင်းချသူ: Fixtone Onlinestore